Top Awesome Android Games Waxaad u baahan tahay in Isku day
Qof kasta oo ku wareegsan waa marag xaqiiqada ah in kulan Android u ururinaya maalinta qiimaha suuqa iyaga oo maalin. Waxaa jira dad aan ciyaari karo kulan oo tayo leh sida qiimo yar yahay. Laakiin aad dadka ma u leeyihiin in ay rafaad farabadan oo dhan, maxaa yeelay, waxaan doonayaa in aan saxan soo baxay 10ka kulan ee Android oo lacag la'aan ah.
Kulankaan Android free yahay oo dhan ku saabsan cunista ama in la wada cunaa. Waxaad kaliya inay qabsadaan gacanta u yar, oo wax cuna ciyaartoyda ka soo adduunka oo dhan si ay u noqdaan kuwa ugu awoodda badan.
2. Arrimaha Didabadda Me
Kulankaan Android lacag la'aan ah Tablet waa kulan kaalinta labaad dhamaadka lahayn, taas oo laguugu qaado gacanta u faaruqiyeen aad jeceshahay, loogana dunida ka mid ah kulan cusub mini.
3. mara Surfers
Kulankaan Android free waa ciyaar halyeynimo oo leh heerar orodka aan dhamaadka lahayn. Your Hadafkayagu waa in sida ugu dhakhsaha badan u ordaan oo aad leedahay si looga fogaado ciyaarta obstacles.This waa mid ka mid ah kulamada ugu qabsado.
4. Si aad u
Kulankaan Android oo lacag la'aan ah ku saabsan tahay daryeelka xayawaanka. Pou ka yimid meel dibadda iyo aad leedahay si aad u cunto, isla markaasna isaga la ciyaaro.
5. Hadalka Tom
Kulankaan Android oo lacag la'aan ah ayaa sidoo kale ku saabsan xayawaanka. Kulankan in aad is ogow of carabiyo dhallinyarada yar oo ay soo bixi doonaan inay cat.This kulanka dadka waaweyn waxaa ka buuxa farxad iyo aad heli karto kulankaan ka link ah.
6. Freeplay Sims ayaa
Taaso ah uga soo wajaahan farshaxanka electronic soo dhawaado kiniiniyada aad si aad u bixiyaan fursad ay u farsameeyaan characters asalka, iyaga dhisaan guryahooda, iyaga dhici jacayl, waxay leeyihiin ilmaha ama ku noolaadaan noloshooda si kasta aad rabto.
Qaybta labaad ee Temple Run u qeexday ciyaaraha mobile. Tani adventurous ciyaarta Android free waa ciyaar orodka aan dhamaadka lahayn, taas oo aad qabto in ay ku boodaan, soo noqdaan oo ay simbiriirixan iyada oo kaymaha iyo dhammaan miinooyinka. Waxaad tijaabin kartaa awood orodka aad si fudud u soo degsado kulankaan ka link download.
8. Way gaajoodeen, Shark Evo
Kulankaan waa dhan oo ku saabsan xakamaynta shark gaajaysan in uu wax ka cuno wax walba oo soo socda in ay hab.
9. Hadalka Angela
Kulankaan Android free loox oo mar kale waa ciyaar xayawaanka, taas oo aad fursad u leeyihiin la siiyo nolosha cajiib ah in carabiyo Angela ah. Waa in aad uga dhigin qof caan ah, iyada lagu quudiyo oo iyada u labistaan ​​ilaa.
Tani cajiib ah kulankii Android oo lacag la'aan ah ayaa qaababka 3D macquul ah. Kulanka waxa uu soo bandhigayaa afar koob oo Glam Slam.
Top 10 Bixiyay Android Games
1. Minecraft jeebka edition
Waxaan aad u soo bandhigaan ciyaar adduunka ee ugu caansan kuwaas oo ay tahay in la ciyaaray looxyada aad Android. Kulankaan ayaa gebi ahaanba waa ciyaar adventurous la hababka hal abuur.
Kulankaan oo xiiso leh waa dhan oo ku saabsan caawinta Taylor ah ayaa ku burburtay moon oo isagu garan maayo meesha uu inta kale ka mid ah shaqaalaha markabka yahay. Oo sidaas waa inaad mid ka mid ah oo kaliya uu gaadhi karto in ay la xiriiraan.
3. wuxuush cunay Dhalashada Cake
Kulankaan Android adventurous waa dhan oo ku saabsan raadinta Niko ee dhalashadiisa cake iyo dhererka waqtiga waxa uu noqonayaa mid ergo si loo badbaadiyo Gogapoe Island, kaas oo dadka iyo wuxuush wada nool yihiin.
4. Joometri Dash
Kulankaan Android loox waa u fududahay in ay bartaan, laakiin adag tahay in la ciyaaro. Kulankaan fudud yahay oo dhan ku saabsan boodayaa iska ma ka yahay khataro.
Price: $ 2.48 <
Kulankaan Android waa dhan oo ku saabsan dhismaha munaaradaha, ka dib markii casriyaynta ugu fiican, helitaanka wakiilada gaar ah oo lagu dilay Bloon kasta oo isku dayda in ay ka adkaan aad munaaraddii.
Kulankaan Android cajiib ah si weyn u amaanay eedeymahaas. Kulankan aad leedahay si ay u caawiyaan Maxwell xallinta xujooyinka. Kulankaan waa mid xiiso leh kama dambaysta ah ee da 'walba leh.
7. mashearulxaraam Valley
Kulankaan Android waa dhan oo ku saabsan sahaminta oo xiiso leh cusub oo aad u leeyihiin in ay Hanuuniyo amiirad ku aamusan.
In kulankaan, meeraha kasta waxay leedahay hal-abuurnimo, haddii ay tahay jasiiradaha fog oo Samada ka yimid ama She'ool. Waxaad qaadan doono safarka walba iyo tirtiro dhigaynaa Dambiilayaasha in ay muujiyaan ilaa in this biimayn tallaabo qodayaan.
9. Dhismaha Qabille 2014
Codadka cajiib ah kuwa doonayay in la dhiso wax Kulankaan. Kulankaan waa dhan oo ku saabsan xakamaynta 14 mashiinada dhismaha asal ahaan loogu tala galay oo ah goobaha dhismaha weyn sida barkadaha dabbaasha ama goobaha magaalada.
Tani waa ciyaar xujo qurxoon in imtixaami maskaxdaada.
The Most Popular Download Game Site
Waa hagaag ciyaarta ugu dhisnaa download goobta waa dukaanka Google Play. Waxaad ogaan kartaa nooc kasta oo Android ciyaar aad doonayseen. Dadka doonaya inuu ciyaaro laakiin aysan fulin karin kharashka ciyaaro tayo leh waa inay booqdaan this site sababtoo ah waa goobta keliya ee aad bixisaa kulan tayada iyo in aad lacag la'aan ah oo ah qiimaha. Goobta Tanu waa meesha ugu fiican si ay u sahamiyaan kulan Racing, kulan Dagaal, kulan Adult, kulan Strategy ah iyo qaar badan. Waxaad dadka ma u leeyihiin in ay ka welwelin, maxaa yeelay waxaan doonayaa in aan kuu soo bandhigo link rasmiga ah ee internetka si aad u xoojinno waa in adduunka oo xiiso leh iyo biimayn iyo nasato maankiinna. Marka la eego hoos ku qoran waa link rasmiga ah ee website-kan.
> Resource > Game > Top Awesome Android Games Waxaad u baahan tahay in la isku dayo